१४ दिन गुप्तबास बस्दैमा कोरोना जितिन्छ ?
नेपालगन्ज : विश्वलाई नै त्रसित बनाएको कोरोना भाइरसको असर नपर्ने कोहि छैन । कोरोना भनेर नाम नलिएको मान्छे सायदै नहोला । अहिले विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको असर धेरै नै परिसकेको छ ।
कोरोना भाइरस देश भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा संक्रमण भएको विरामिलाई विशेष हेरविचार सगै १४ दिन भित्र २,३ पटक सम्म पिसिआर परिक्षण गर्ने गरिएको थियो । संक्रमण भएको पुष्टी भएसगै विरामीलाई निको भए नभएको, संक्रमण बाकि रहेको नरहेको पत्ता लगाउने काम गरिएको थियो ।
नेपालगन्जमा शुरुका दिनमा एक वृद्धमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनलाई खजुरा स्थित क्यान्सर अस्पताल कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचारका लागी राखियो । उनि वृद्धले १४ दिनमा घर जान पाएनन् कारण थियो विचमा पिसिआर परिक्षण गराउदा कोरोना संक्रमण बाँकी नै थियो । त्यस्तै धेरै परिक्षण शुरुका दिनमा भएपनि विस्तारै उक्त परिक्षण गरिन छाडिएको छ ।
हचुवाको भरमा कोरोना संक्रमितहरुलाई निको भयो भनेर छाडिएको छ । कोरोना संक्रमितहरुलाई यसरी छाडिदा संक्रमण सकिएको हो भनेर कसरी विस्वास गर्ने नेपालगन्ज उप महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का कोरोना जितेको भनिएका २९ वर्षिय पुरुषले गुनासो गरे ।
आइसोलेसनमा बस्दा कुनैपनि लक्षण नदेखिएको मानिसहरुलाई घर गएको केहि दिनपछि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकि लाग्ने गर्दा कतै कोरोना भाइरसको बाँकी अशं रहेको होकि भन्ने त्रास बढाउने गरेको एक संक्रमितले बताए । संक्रमितहरुले पटक पटक आग्रह गरेपनि दोश्रो पटक परिक्षण नगराएको गुनासो गरेका छन ।
स्वास्थ्य कार्यालयले कोरोना संक्रमण भएको १४ दिनसम्ममा कोरोनाको भाइरस सकिने भएकाले पुनः चेकजाच नगरी घरपठाउने गरिएको जनाएको छ । पहुचँमा रहेकाहरुले अझैपनि संक्रमण भएको १४ दिनको विचमा परिक्षण गराएर ढुक्क हुने गरेका छन, तर पहुचँ नभएकाहरु कतै कोरोना अझै बोकिरहेका त छैनौ भनेर त्रासका विचनै हिड्न बाध्य छन । कोरोना जितेर घर फकिएको पनि १० दिन भन्दा बढि भयो तर बेला बेलामा घाटि खसखस गर्दा, खोकी लाग्दा पनि कोरोना अझै बाँकी छ कि भन्ने डर लागरिहन्छ एक पुर्व संक्रमितले आफ्नो अनुभव सुनाउदै भने ।
यसरी १४ दिनमा कोरोना निको हुन्छ भन्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले संक्रमितहरुलाई किन ७ दिन घरमा होम आइसोलेसनमा बस्नुहोला भन्दै छाडेका होलान भन्ने चासोको विषय बनेको छ । १४ दिन पुगाएकाहरु धेरै जसो उसैदिनदेखि आफ्नो काममा फकिएका हुन्छन । स्वास्थ्यकर्मिहरुले १४ दिन पछि संक्रमितहरुको अवस्थापनि रिपोर्टिङ नगर्ने हुदाँ यो प्रभावकारी नदेखिएको हो । होम आइसोलेसनमा बस्नु भनेकाहरुपनि घरमा नबस्दा कतै संक्रमण समुदायमा फैलिएको त छैन ?
उकातिर सरकारले कारोना संक्रमित पत्ता लगाउदै आइसोलेसनमा राख्ने गरेको छ, भने अर्कोतिर ति संक्रमितहरुको विना चेकजाच १४ दिन कोठामा बस्न लगाएर छाड्ने गरेको छ । केहिले प्रश्न गरेका छन् कि १४ दिनमा कोरोना सकिने भए लकडाउन भएको यतिका महिना वितिसक्दा पनि किन सकिएन ? कोरोना संक्रमित गम्भिर प्रकारका विरामिलाई प्लाजमा दिने भनिरहदा कोरोना जितेकाहरुको प्लाजमा लिदा पुनः पिसिआर किन चेकजाचँ गरिन्छ ? कोरोना सन्चो भएर घर फर्काएकाहरुलाई प्लाज्मा दिदाँ पिसिआर किन परिक्षण किन आवश्यक ? यो बेला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यस्तै धेरै प्रश्न धेरैले गरिरहेका छन तर जवाफ चित्त बुझ्दो कसैले दिन सकेका छैनन् ।
कोरोनाको कहरका विषयमा दिर्घकालिन योजना नहुदाँ पनि यस्ता समस्याहरु आइरहेका छन । सरोकारवाला निकाए त यो बेला लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने तर्फ मात्र बढि ध्यान दिइरहेको छ । समस्याको समाधान लकडाउन र निषेधाज्ञा होइन भनेर कहिले र कस्ले बुझने ?
नेकपा बाँकेका नेता रत्न खत्रि सहित ६० जना कोरोना मुक्त
बाँकेमा आज ६० जना डिस्चार्ज हुँदै, सक्रिय संक्रमित ३४५ मात्रै